के हो कब्जियत ? – मुलधार न्युज
Home > Front News > के हो कब्जियत ?
२ आश्विन २०७४, सोमबार ०१:१४
कब्जियत रोग एक, समस्या अनेक । कब्जियत अर्थात दिसा खुल्सत न हुनु हो । यस को समस्या बाट आज ९०% प्रतिशत व्यक्तिहरु प्रभावित छन् भन्दा अतियुक्ति न होला । कब्जियत हुनु , पेट गडबड हुनु, पेटमा ग्यास बन्नु, पेट सफा नहुनु आदि जस्ता समस्याहरु गाउँको भन्दा सहरी जीवनमा एक आम समस्या भइसकेको छ । भनिन्छ पेट ठीक त सबै ठीक । पेटबाट नै छत्तिस प्रकारको रोगको सुरुवात हुन्छ , जस्तै- पाइल्स (अल्काई) , ग्यास्ट्राइटिस, डायबिटिज , टाउको दुख्ने, मुख गन्हाउने, वाक-वाकी लाग्ने , बान्ता हुने आदि । पेट नै रोग को घर हो । यदि तपाईँको पेट ठीक छ भने अर्थात पाचन प्रणाली सही छ भने तपाईँको स्वास्थ्य ठीक छ ।
पेटको सम्बन्धमा एउटा भनाइ छ, ‘जहाँ बढा पेटका घेरा , वही डाला रोग ने डेरा ‘ अर्थात सामान्य आयतन भन्दा ठूलोआकारमा पेट बढनु को अर्थ हो रोगले शरीरमा डेरा जमाउनु । तर बिडम्बना हेर्नुस्, हाम्रो समाजमा भुँडी लाग्यो भने यसलाई राम्रो मान्छन् । स्वस्थ्य र सम्पन्नता को प्रतिक ठान्दछन् । साथीभाइहरुले भन्छन्- क्या हो- मोटाइछस् नि यार, भुँडी लागेछ नि ! आदि । तर वास्तवमा भन्ने हो भने पेट बढनुको अर्थ व्यक्तिमा रोगको सुरुआत हुनु हो ।
-कान्तिपुर दैनिक बाट साभार